DAAWO VIDEO – Sumcadda Islaamka
Ugu horeyntii waxaan ka cudur daaranayaa inaanan qormo kooban ku soo gudbin karin waqtiga iyo waxa ay u baahan tahay masalada ku saabsan maxramka diintu fartay inay dumarku raacaan waqtiyada safarka meel habeen iyo maalin loo socdo ama maalin socod ah iyo ka badan. Daliilada arintaa ku soo aroorayna aad ayay u badan yihiin waana kuwo laga dharagsan yahay,mana aha iminka ujeedadayda soo gudbinta daliilo badan oo arintaa ku saabsan,waxanse doonayaa inaan diiradda saaro waxa ay hal-doorka culimada ahee diinta falaqeeya arinkan ka yiraahdeen, ama sida ay u fahmeen una…
Waxaan maanta joognaa duni ay dadka ku nooli ku tartamayaan qiimaynta iyo qurxinta waxa ay qolo kastaba qaybta u heshay. Waxaan har iyo habeen arkaynaa dadyow kala duwan oo ku faanaya hidahooda soo jireenka ah oo ay aad u qurxiyeen kana saareen wixii khaldaad ku jiray dabeetana soo bandhigeen si dadka u daneeyaan uguna daydaan. Kolka laga soo tago tartanka dhaqanada waxaan iyadana goobta ka marneyn kuwa diinta oo aan inta badan dhaqanada ka dheereyn. Waxaan u jeednaa boqolaalka kun ee diimood ee dunida ka jira in mid kastaayi ku…
Afar iyo toban qarni ka badan ayaa laga joogaa waqtigii uu Rabi ku soo dajiyay rasuulkiisa Maxamed ah scw kitaabka furqaan oo ahaa midka kala saaray xaqa iyo baadilka isla markaana koobay oo saxay wixii laga khalday kutubtii isaga ka horeysay. Laga soo bilaabo mudadaas ka badan kun iyo afarta boqol oo sano diinta islaamka waxyaalaha aan isbadalin ee ay la timid waxaa ugu muhiimsanaa,iimaanka iyo akhlaaqda suuban iyo dhaqan galintooda. Islaamku markaa uu yimid iyo mudadooyinkii ka dambeeyayba marna iskuma dayin oo uma qasdin inuu badalo dadka hidahooda…
CAALAMKA ISLAAMKA, DAAWO VIDEO, DHACDOOYINKA DUNIDA MUSLIMKALeave a comment